Ny SKF dia miorim-paka ao Shina ary i Shanghai Kaiquan dia mandeha manerantany
Tamin'ny 9 Mey 2018, Andriamatoa Tang yurong, Svenska kullager-fabriken vondrona filoha lefitra ambony sy filohan'ny SKF Asia, ary Andriamatoa Wang wei, filohan'ny departemantan'ny varotra indostrialy SKF China dia nitsidika an'i Shanghai kaiquan tamin'ny anaran'ny vondrona SKF.
Andriamatoa Wang jian, filoha lefitry ny vondrona kaiquan, dia nandray tamim-pitiavana ireo vahiny ary nilaza tamin'izy ireo ny fizotry ny fivoaran'ny vondrona kaiquan. Andriamatoa Wang dia niaraka tamin'ireo vahiny hitsidika ny trano paompy kaiquan sy ny sehatra rahona manan-tsaina ary nanao fampidirana amin'ny antsipiriany. Ny roa tonta dia naneho ny fikasan'izy ireo hanamafy ny fiaraha-miasa.
Andriamatoa Lin kaiwen, filohan'ny vondrona kaiquan, dia nanapa-kevitra ny hanao fiaraha-miasa lalindalina momba ireto olana manaraka ireto amin'ny alàlan'ny fampiasana mari-barotra efa nahazo alàlana taorian'ny fifanakalozan-kevitra tamin'ny solontenan'ny vondrona SKF:
1. Hampitombo ny fiaraha-miasa stratejika ary hanitatra tanteraka ny fiaraha-miasa amin'ny vokatra maro, sehatra ary indostria;
2. Manamafy ny fifandraisana ara-teknika, ao anatin'izany ny fampandrosoana ny vokatra vaovao, ny fanavaozana ny vokatra ary ny fanatsarana ny endrika;
3. Manatanteraka fiaraha-miasa lalindalina amin'ny fanaraha-maso ny fahombiazan'ny fitaovana mihodina. Ampiasao ny tahiry fahalalana an'ny roa tonta amin'ny sehatra samihafa, ampivoaro ny paikady hentitra amin'ny fitsapana ny fahombiazan'ny fitaovana mihodina mihatra amin'ny indostrian'ny paompy China; Mampiasà angon-drakitra lehibe sy fanodinana rahona hanampiana ny mpanjifa hahatratra ny fahitana sy ny fahitana ny fahombiazan'ny fitaovana mihodina.
SKF no mpanamboatra bearings mihetsiketsika manerantany, miaraka amina asa any amin'ny firenena 130 ary maherin'ny 500 tapitrisa no vokarina isan-taona. Shanghai kaiquan, amin'ny maha-orinasa lehibe amin'ny indostrian'ny paompy eto an-toerana, dia hanao ezaka miaraka amin'ny SKF mba hahazoana zava-bita lehibe kokoa amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny vokatra, ny fanatsarana sy ny fanavaozana. Andraso ary ho hitantsika!
Fotoana fandefasana: Mey-12-2020